दुई करोड अमेरिकी डलरको नयाँ घर खोज्दै प्रियंका र निक ! « News24 : Premium News Channel
दुई करोड अमेरिकी डलरको नयाँ घर खोज्दै प्रियंका र निक !
काठमाडौं । बलिउड तथा हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसको जोडी सबैको नजरमा पर्छ । प्रियंका र निक दुवैको फोटो होस् या भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएकै हुन्छ । भर्खरै मिडियामा आएको रिपोर्टका अनुसार प्रियंका र निकले लस एञ्जिलसमा नयाँ घरको खोजी गरिरहेका छन् । नयाँ घरको लागि प्रियंका र निकले दुई करोड अमेरिकी डलर तयार गरेका छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रियंका र निकले लस एञ्जिलसको बेवर्ली हिल्सको आसपास नयाँ घर खोजी गरिरहेका छन् । नयाँ घर खरिद गर्नका लागि उनीहरुले दुई करोड अमेरिकी डलर तयार गरेका छन् । दुई करोड मध्ये ६५ लाख अमेरिकी डलर भने बेवर्ली हिल्सको पासमा रहेको निकको घर बेचेर जुटाएका बताइएको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रियंका र निकको पहिलेको घर ४,१२९ स्क्वयर फिटमा फैलिएको थियो । वर्कफ्रन्टको कुरा गर्नुपर्दा ११ अक्टोवरबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदै गरेको ‘द स्काई इज पिंक’ मार्फत प्रियंका पर्दामा पुनः देखिदैछन् ।